Ejypta: Mpitoraka Bilaogy Alaa Abd El Fattah Notazomina 15 Andro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Novambra 2011 5:30 GMT
Notazomina nandritra ny 15 andro ilay mpitoraka bilaogy mafana fo, Alaa Abd El Fattah, taorian'ny fandavany ny fanadihadiana tokony ataon'ny mpampanoa lalàna miaramila taminy, nolaviny izany fanadihadiana noho ny tsy maha ara-dalàna azy.
Tonga tao amin'ny mpampanoa lalàna miaramila izy, niaraka tamina mpiserasera iray Bahaa Saber, nitangorona tao ivelany avokoa ireo mpanohana azy, miampanga ny fitsarana ady miaramila. Nanomboka tamin'ny 28 Janoary, olo-tsotra maherin'ny 12,000 no notsaraina tao amin'ny fitsarana ady miaramila ao Ejypta. Nafindra fonja i Abd El Fattah, raha toa ka noahafahana kosa i Saber.
EFa nogadraina ireo mpiserasera anankiroa ireo tamin'ny taona 2006 nandritra ny fitondran'i Hosni Mubarak.
Sharif Kouddous nanao fanamarihana:
@sharifkouddous: Tsy mampino. @alaa sy Bahaa nahazo sazy an-tranomaizina 15 andro, tezitra avokoa ireo mpanohana tao ivelany.
Bahaa Saber, eo ankavia, ary i Alaa Abd El Fattah miatrika fitsarana androany maraina. Sary avy amin'i Sharif Kouddous
Ni-tweet mikasika ireo fanenjehana an'i Alaa, Bahaa ary i Mina Daniel ny mpisolo vava Gamal Eid, Mina Daniel izay nisy namono tamin'ny vono olona 9 Oktobra tao “Maspero”. Nanoratra izy hoe:
@gamaleid: Ireo mpiserasera dia voampanga ho: nitarika nanao fihetsiketsehana, naka ny fitaovam-piadian'ny tafika ary nanimba ny fitaovan'ny miaramila
@gamaleid: Alaa Seif nandà tsy hohadihadian'ny Mpampanoa lalàna miaramila satria anisan'ny tafika ity farany ity ary anisan'ny voampanga amin'ny raharaha koa ihany koa ny tafika. Tsy ara-dalàna ho an'ny voampanga ny manao fanadihadiana amin'ny voampanga iray
Mona Seif, anabavin'i Alaa nanamarika hoe:
@Monasosh: Henjana ny hevitra nijoroan'i Alaa sy i Bahaa satria nandà tsy hankatò ny mpampanoa lalàna miaramila izy ireo.
Mohamed Abdelfattah naneho ny heviny mahakasika izany:
@mfatta7: Fiarahabana noho ny herim-po nasehoan'i @alaa tamin'ny fandavany tsy hohadihadian'ny manam-pahefana miaramila izay voampanga ihany koa.
Jonathan Rashad nanampy hoe:
@JonathanRashad: Karazana esoeso ny mahita fa hiatrika fanadihadiana miaramila amin'ny fararano 2011 i @alaa kanefa ny anabaviny @Monasosh nitolona manohitra ny fitsarana miaramila nanomboka tamin'ny lohataona 2011.
Jonathan Moremi nanontany hoe:
@Jonamorem: Aiza ho aiza ny mikasika ny fampanantenana tsy hitsara olo-tsotra manoloana ny fitsarana miaramila intsony, Tantawi? Ny mandainga ve no mba hain'ny #SCAF atao? #FreeAlaa #noMilTrials
Tahaka ny maro hafa, tohina tanteraka i Gigi Ibrahim fa anisan'ireo voampanga ihany koa i Daniel izay efa namoy ny ainy. Ni-tweet izy hoe:
@Gsquare86: Novonoin'izy ireo i Mina Daniel ary maty izy, nampangain'izy ireo ho “nitarika herisetra” izy ?!!! #WTF #SCAF tena tsy ampy saina
Tamin'ny fotoana namoahana ity lahatsoratra ity, mbola natao fanadihadiana i Bahaa Saber.
Mona Seif ni-tweet:
@Monasosh: Mbola atao fanadihadiana i Bahaa Saber. Mbola tsy vita foana izany.